သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုရင်…
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:45 PM
ဒို့ တော့ DV ပဲဖိလျှောက်နေတာ။ဘယ်နနှစ်ရှိမှန်းမသိတော့ပါဘူး။
i am one of ur blog reader and now i would like to ask u some of the question.
i am now staying in sg and working here if i would like to work in CA what should i do. i got the diploma from sg also.
i really wish to work in CA but i do not know how to start.
sorry for toubling u and thanks in advance.
အမ အိန်ဂျယ်လ် အဆင်ပြေပါစေနော်။
ကနေဒါမှာ လိုနေတဲ့ အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ လာဖို့ရန်ကတော့ အမှတ်မှီရပါတယ်။ အင်တာဗြူးလဲ အောင်ရပါတယ်။ အခက်အခဲကတော့ အင်တာဗြူးလုပ်သူရဲ့ စိတ်ပေါ်မှာ၊ ကိုယ်ဖြေတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချင်းခံရတာပါပဲ။ စင်္ကာပူမှာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလဲရှိတယ်။ ကနေဒါကလဲ အဲဒီလုပ်ငန်းမှာ လူလိုတယ်၊ ကိုယ်ကလဲ အရည်အချင်းပြည့်မှီရင် ရဖို့ရှိပါတယ်။ (အဲဒါလေး ကျမ အထက်မှာ ထပ်ဖြည့်ထားလိုက်ပါတယ်)။
ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကတော့ မြန်မာပြည်ကဘွဲ့နဲ့ စလုံးမှာလဲ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရဲ့သားနဲ့ ၀င်ခွင့်မရလိုက်ပါဘူး။ အင်တာဗြူးတဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားအမျိုးသမီးရဲ့ မြန်မာတွေအပေါ်မှာ အမြင်အပေါ်မှာလဲ မူတည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့စကားပြောတဲ့အခါ၊ အထက်ကလဲမပြောပဲ၊ အောက်ကလဲ မပြောပဲ၊ တန်းတူပြောပြီး၊ ကိုယ်ကလဲ တစ်ကယ်ဒီလုပ်ငန်းမှာ ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာကို အင်တာဗြူးလုပ်သူတွေကို သိစေရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကတော့ အခုတော့ အင်္ဂလန်မှာ မာစတာဘွဲ့ယူပြီး အဆင်ပြေနေပါပြီ။
Thanksalot for ur prompt response.
if i would like to know something can i ask u?
may i know how can i contact u?
sorry to trouble u sis , i really do not have fri and really wish to go that why.